Iindlela ezili-10 zokuxelela ukuba inamba enentshebe iyafa - Okunye
Ufeng Shui Imiboniso Yesilayidi
Iindlela ezili-10 zokuxelela ukuba inamba enentshebe iyafa
Iidonons ezinentshebe, okanye 'iindevu,' zezinye zezilwanyana ezithandwa kakhulu kwizilwanyana zasekhaya, ngakumbi ngabagcini bezirhubuluzi. Ngenxa yokuba banononophelo oluthile, ukutya kunye neemfuno zobushushu ezinokuthi ziphoswe ngumqali kunye nabagcini abanamava ngokufanayo, kubalulekile ukwazi ukuba uxele njani ukuba inamba yakho enentshebe iyafa ukubayisa kugqirha wezilwanyana onamava kwangoko.
1. Akukho zihambiso
Ukugcina umkhondo wokuba i-beardie yakho ihambisa amathumbu kangaphi linyathelo eliyimfuneko ekuqinisekiseni ukuba basempilweni. Ukuba i-beardie yakho ayiphelanga kwiintsuku ezininzi, kukho ithuba lokuba anganakho ukusebenza kwiimpawu zabo ezinokuthi zikhokelele ekufeni. Ngelixa zikhona izinto onokuzenza ukubanceda ukuba bahambe, njengokuhlamba okanye ukubondla ngethanga eliconjulweyo, kufuneka ubonane nogqirha wezilwanyana malunga namanyathelo alandelayo.
Wazi Njani Xa Intaka Isifa?
Ndazi Njani Ukuba Inyoka Yam Iyafa?
Uxelela njani ukuba ufudo luyafa: Iimpawu zoqobo
2. Urhudo kunye neNdawo enegazi
Kwicala elineflip likahayi ukuhamba kwamathumbu Ukuhamba okungenampilo, ngakumbi urhudo. Ukuba i-beardie yakho ivelisa isitulo samanzi okanye ubona iimpawu zegazi, banokuba benengxaki yokufumana iiparasites okanye iingxaki ngokutya kwabo kunye nongenelelo lonyango olufunekayo kwangoko. Olunye uphawu lwe-beardie yakho inokugula kukuba ilindle labo linevumba elibi kulo. Isizathu esinokubangela iingxaki kwisitulo sabo sinokuba njalo Ukutya okungafanelekanga , iiparasites, indawo yokuhlala emdaka okanye ukungcola okungafanelekanga, ukukhanya kunye namaqondo obushushu.
3. Ukuyeka ukuhamba
Iindevu ngokuqinisekileyo ziyakonwabela ukuzonwabisa, kodwa ukuba ubona inyoka yakho ingashukumi kwaphela, okanye ihamba kancinci kunesiqhelo, olu luphawu lokuba banokugula kakhulu. Rhoqo oku kunokwenzeka ngenxa ubushushu obungafanelekanga okanye ukukhanya , enefuthe elibi ngqo kwimetabolism. Kuya kufuneka ujonge imeko yetanki yakho kwezi zinto ukulawula ukukhanya kunye / okanye ubushushu njengengxaki. Kuqhelekile ukuba iindevu zibe yinto eyothusayo ukuba bakulungele ukubetha, okanye ukuphalaza. I-beardie eneseti efanelekileyo kwaye engaphalazi kufuneka isebenze kwaye iphaphe. Ukutyelela kugqirha wezilwanyana kuyafaneleka ukuba ubona ubuvila.
4. Ukunqongophala kokutya
Ngelixa ayiqhelekanga ngokupheleleyo inamba yakho enentshebe ukungatyi yonke imihla, ukungabikho komdla kunokuba ngunobangela wexhala kunye nezinye iimpawu. Izizathu eziqhelekileyo i-beardie ayizukutya zezi:
Ezinye iindevu ziyayeka ukutya ukuba ziziva zinoxinzelelo, okwenzeka rhoqo xa iindevu ezintsha ziziswa ekhaya kwindawo entsha.
Abanye abayi kutya ukuba itanki labo alifudumali ngokwaneleyo, kuba ubushushu yinxalenye ebalulekileyo yemetabolism esebenzayo yecikilishe.
Kwangokunjalo, ukuba abafumani kukhanya ngokwaneleyo kwe-UVB, oku kungakhokelela kukutya okungalunganga.
Kuya kufuneka ujonge zonke ezi zinto zinokwenzeka xa uqaphela ukuba i-beardie yakho ayinantshisakalo, kwaye ukuba ungazisusa zonke kwaye akakatyi nokuncipha, thetha nogqirha wezilwanyana kwangoko. Unokuba ne-parasites, impaction okanye iingxaki ekudleni kwabo.
5. Iingxaki ngentshukumo
Isifo esiqhelekileyo esiqhelekileyo phakathi kweendevu kunye nezinye izilwanyana ezirhubuluzayo Isifo seTambo leMetabolic . Olunye lweempawu zesi sifo yingxaki yokuhamba, ngokungathi abanawo amandla okulawula amalungu abo kwaye ubona ukudikiza okanye ukungcangcazela, kudibene nokudinwa nokungabinamdla wokutya. Ukuguqulwa kwamathambo ikwayingxaki eqhelekileyo kwiidonons ezinentshebe ene-MBD kwaye unokuqaphela ukukhubazeka emqolo, emilenzeni okanye emihlathini. Uphawu lwesithathu lwe-MBD ziingxaki ekubambeni izinambuzane eziphilayo, kuba ukungakwazi kwabo ukuhamba ngokuchanekileyo kuthintela ukubanakho kwabo ukubamba ii-bugs ezihamba ngokukhawuleza ezinje ngee crickets. Impembelelo nayo inokubangela iingxaki ngokuhamba, ngakumbi xa icikilishe likhangeleka ngathi imilenze yalo yangasemva ayisebenzi kwaye kubonakala ngathi liyazirhuqa lijikeleze itanki.
6. Iingxaki zolusu
Ezinye izinto ezixhalabisa impilo ye-beardie zibandakanya ukubola komsila, ukubola komlomo kunye nefungus etyheli. Ezona mpawu zibonakalayo zezi ngxaki zibonakalayo kwesikhumba secikilishe ezifana namabala amdaka ngombala, ingakumbi emlonyeni, ukubonakala kokubola, amanxeba avulekileyo, ukudumba okanye ukudumba. Olunye uphawu kukuba ulusu lubonakala luthuthu okanye lungwevu kwaye oku kubhekisa kulusu olungaphalazelwanga okwangoku.
7. Amehlo a-Sunken
Ukuba amehlo akho e-beardie abonakala ngathi 'atshonile' entlokweni yakhe okanye ewile, kwaye kubonakala ngathi kugxilwe, kuqaqambile kwaye kucacile , lo ngumqondiso wokuphelelwa ngamanzi emzimbeni. Ukubabonelela ngamanzi okuhlamba, isitshizi samanzi esivela kwibhotile, kunye nePedialyte ngesilayidi esincinci esincinci kunokunceda ekuphelisweni komzimba. I-lizard e-dehydrated inokungena ngokukhawuleza ekuguleni nasekufeni, kwaye ukungenelela kwangoko kubaluleke kakhulu ekugcineni i-beardie yakho kakuhle.
8. Ulusu oluKhanyayo
Ulusu lukaBeardie olubonakala ngathi lushwabene luphawu lokwehla kwamanzi emzimbeni. Unako 'nokuvavanya' ulusu ngokuthatha iminwe yakho kwaye uyitsale kancinci kulusu ukuze ubone ukuba lubuyela endaweni. Rhoqo, ulusu olusempilweni kufuneka lubonise ukutyeba kwaye luhlale njengesiqhelo, ngelixa ulusu olomileyo nolunamanzi alunakukwenza oko. Ukuba icilikishe lakho liphelelwe ngamanzi emzimbeni, unokuqaphela ukuba umsila wabo ubonakala ulusu kunesiqhelo kwaye iindawo zabo ezinamanqatha, okanye iipads, zibonakala zitshonile.
9. Imiba Yokuphefumla
Enye ingxaki eqhelekileyo kwiindevu yimicimbi yokuphefumla ngenxa yokufuma okungafanelekanga okanye amaqondo obushushu kwitanki labo. Ukuba uqaphela ukuba i-beardie yakho iphefumla ngokungaphefumli okungako okanye ukuphefumla nzima okanye ukuphefumla umlomo ovulekileyo, oku kunokuba luphawu lokuba banosulelo lokuphefumla. Inokuba ngumqondiso wokuba batshisa kakhulu, oko kunokubangela ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunye nokubetha. Ukuba uqaphela ukumba kwe-beardie, ukuhlala ezimbombeni okanye phantsi kokuhombisa okanye ukwenza ngathi bafuna ukuphuma etankini, jonga useto lobushushu bakho ukuze uqiniseke ukuba akushushu kakhulu.
10. Ukuhlala kwicala elibandayo
Ukuseta ngokufanelekileyo i-beardie kuya kuba nendawo ebandayo nefudumeleyo etankini kunye nendawo yebhasikithi. Ukuba i-beardie yakho ihlala kwindawo ebandayo kwaye ayishiyi, esi sisizathu esikhawulezileyo sokukhathazeka. Ukuba isilwanyana esirhubuluzayo asikwazi ukuzifudumeza, imetabolism yaso ayizukusebenza ngokufanelekileyo enokuthi ikhokelele ekufeni ngokukhawuleza. Ukuba i-beardie yakho ayisihambeli kwiindawo ezishushu zetanki okanye kwindawo ye-basking, kusenokwenzeka ukuba banengxaki yemicimbi yezonyango ebathintelayo ekubeni babe namandla okuhamba kwaye bafuna utyelelo lwezilwanyana ASAP.
Ukwazi imiqondiso yeDrag enkulu yokufa kweempawu
Qiniseka ukuba uyaziqonda zonke iimfuno eziyimfuneko zokusingqongileyo iindevu zakho , kubandakanya ukukhanya, ukufuma, amaqondo obushushu kunye nokutya okufanelekileyo njengoko uya kuzifuna kungekuphela nje ukugcina impilo yakhe kodwa nokulawula izizathu xa ubona iimpawu zokugula. Kubalulekile ukunxibelelana ne-beardie yakho rhoqo kwaye ugcine iliso lakho malunga nokuba batya kangaphi, ukuphelisa kunye nokubonisa isimilo esisebenzayo ukubonisa ukuba kunokwenzeka ukuba bayafa xa kusekho ixesha lokungenelela. Qinisekisa ukuba unogqirha wezilwanyana osondeleyo kuwe ojolise kwi-exotic ukuze wazi ngokuthe ngqo ukuba uye phi xa kucacile ukuba ungenelelo lonyango luyafuneka kwangoko.
Ukwabelana Ngesondo Nokuthandana Abacebisi Ityala Ncedo Umculo Genres I-Ski Areas
Ikati enethamsanqa yaseTshayina apho unokubeka khona ekhaya
ukuhombisa ikhabinethi yasechina ngezitya
zingaphi i-diapers ezisetyenziswa ngabantwana ngosuku
izinto zokwenza usuku lwakho lokuzalwa lwe-14
ungayinika ipenicillin yenja
Ukwahlulwa kwee-asethi kwiphepha lokusebenzela lomtshato
Iphepha Lokusebenzela Ne Iiprinta
Umsebenzi Nokuzalwa Komntwana